Sida loo sameeyo thumbnails YouTube-ka Canva | Abuurista khadka tooska ah
Lola curiel | 01/07/2021 09:52 | General, Tababarada
Sawirrada yar yar ee fiidiyowga waa muhiim, aakhirka waa waxa ugu horreeya ee aan aragno oo xaalado badan ayaan go'aansannay haddii nuxurku ina xiiseynayo ama uusan ku saleysneyn waxa aan ku aragno sawirkaas yar, taasi waa sababta ay muhiim u tahay in la daryeelo ee naqshadeeda. Mawduucan waxaan ku tusaynaa sida loo sameeyo thumbnails YouTube ee Canva waxaanan ku siineynaa xoogaa fikrado ah oo aad ku dabaqi karto abuurkaaga. Haddii aadan gacanta ku hayn qalabkan, ha ka welwelin, wax dhibaato ah kala kulmi meysid markaad sameysid guntintaada maxaa yeelay way fududahay in la isticmaalo, waxaan halkan kaaga tagayaa a hordhac ah barashada Canva si aad u soo qabato
1 Abuur dukumenti cusub
2 Wax ka beddel midabka asalka
3 U diyaari thumbnail soo jiidasho leh Youtube gudaha Canva
4 Kudar sawir PNG leh asal hufan
5 Kudar cinwaan sharaxaad iyo feejignaan-qabasho ah thumbnail-kaaga YouTube-ka
6 Ku dar waxyaabo badan oo muuqaal ah
Abuur dukumenti cusub
Waxaan ku bilaabi doonnaa sameynta dukumiintiga kaas oo aan ku qaabeyn doonno muuqaaladayada yar yar, taasna waxay ku aadeysaa "feyl", "abuur naqshad cusub". Canva ayaa ku caawinaysa Markaad go'aansaneysid cabirka ku habboon qayb kasta, waa inaad tagtaa baarka baaritaanka oo aad qortaa waxaad rabto inaad naqshadeyso. Canva ayaa ku tusi doonta arrimo kala duwan waxayna sidoo kale ku siin doontaa adiga suurtogalnimada in laga shaqeeyo dukumiinti maran. Marka laga hadlayo muuqaalka, Cabbirka websaydhka lagu taliyey waa 1280px x 720px.
Wax ka beddel midabka asalka
Markaad faylka abuurto, beddel midabka asalka. Kaliya waa inaad gujisaa xaashida, iyo riix laba jibbaaran midabka leh taasi waxay ka muuqaneysaa geeska bidix ee sawirka kore. Gudi leh xulashooyinka midabka ayaa furi doona. Haddii aad leedahay astaan, waxaad isticmaali kartaa midabkeeda saxda ah xitaa haddii aadan keydin lambarka. Waayo, faylkaaga astaanta u jiidi shaashadda, waxaa toos loogu geyn doonaa Canva. Markii aad ku darto feylka, dib ugu laabo qeybta xulashada midabka waxaadna arki doontaa inay jirto qayb cusub, "Midabada midabada leh ee sawirada", halkaas waxaad ku haysaa dhammaan midabada astaantaada. Markii aad isticmaasho ama aad qorto nambarada waad tirtiri kartaa sawirka.
U diyaari thumbnail soo jiidasho leh Youtube gudaha Canva
Tilmaamahan aan hadda ku siin doonno sida loo sameeyo thumbnails for YouTube, waxay ku saleysan yihiin casharrada. Waa uun tusaale u adeegi kara waxyi, laakiin dabcan waad u oggolaan kartaa hal-abuurkaaga inuu duulo oo aad sameysid naqshad shaqsiyeed. Kaliya iskuday inaad ka dhigto mid soo jiidasho leh Ghadafi waa inuu noqdaa mid soo jiidasho leh si dadka kale ay u xiiseeyaan fiidiyahaaga.
Kudar sawir PNG leh asal hufan
Sawiradu waxay kaa caawinayaan soo jiidashada dareenka. Haddii aad tahay qofka ku hadlaya fiidiyowga, eWaa fikrad fiican inaad sawir yar ka qaadatid qaab xiisa leh oo aad u isticmaasho sawirka sawirka yar yar. Halkan, tusaale ahaan, waxaan u isticmaali doonnaa shaashadda mid ka mid ah fiidiyowyada laga soo qaaday kanaalkayaga Youtube.
Waxaan ka saari doonnaa asalka sawirka si natiijada ugu fiicnaato. Haddii aadan aqoon sida loo sameeyo, waxaan kugula talinayaa inaad daawato casharradan aan ku baranayno sida loo abuuro Sawirada PNG ee Photoshop. Sikastaba, hadaadan xamili xirmada Adobe, sidoo kale waxaa jira qalab online ah in si toos ah masixi asalka.
Markaad diyaariso sawirkaaga, ku soo rar Canva oo ku dheji. Haddii aad gujiso sawirka, xagga kore ee shaashadda, waxaad ikhtiyaar u leedahay "saamayn", waxaad isticmaali kartaa mid ka mid ah saameynta la heli karo si loo siiyo mugga sawirka, waan codsannay "Curved" qaybta "hooska".
Kudar cinwaan sharaxaad iyo feejignaan-qabasho ah thumbnail-kaaga YouTube-ka
Waxa xiga ee aan ku dari doonno thumbnail waa qoraalka. Had iyo jeer isku day inaad ku darto cinwaanno sharraxaad leh, gaagaaban oo fiiro gaar ah u leh. CasharkaWaxaan isticmaalay xeelad fudud, laakiin aad waxtar u leh.
Tag "walxaha" oo raadi qaab laba jibbaaran. Waxaan dhigeynaa geeska bidix ee kore iyo waxaan u beddeleynaa leydiama. Waxaan sidoo kale badali doonnaa midabka, gujineynaa kuna cadaadinaynaa midabada laba jibbaaran ee laga heli karo qeybta kore. Mareykanka waxaan siinnay midab aad u madow oo aad u madow.
Markaad haysato foomka tag "qoraalka" oo ku dar cinwaan. Waxaan adeegsanay farta culus ee Raleway, laakiin waad dooran kartaa midka aad rabto, waa arrin dhadhamin ah. Qor cinwaanka, sii asalka midabka, iyo dib u cabbir si aad ugu habboonaato leyliga Qoraalku wuxuu u ekaan doonaa sidii meel godan oo lagu xardhay qaabka!
Waxaad ku dari kartaa qoraal dheeraad ah hoosta, had iyo jeer isku dayaya in la akhriyi karo iyo in kala sareynta si fiican loo fahmay. Isku day inaad isku dardarto midabbo kala duwan.
Ku dar waxyaabo badan oo muuqaal ah
Waxaad ku dari kartaa waxyaabo muuqaal ah oo kaa caawinaya fahamka mawduuca fiidiyowga. Xaaladdan oo kale maadaama casharku yahay "sida loo sameeyo thumbnails for YouTube ee Canva", annaga waxaan tagnay "cunsurro" waxaanan raadiney calaamadda Youtube. Adiga oo kugu daraya Waxaan ku dabakhnay saameynta "dhalaalka", qaybta "hooska". Kahor intaadan keydin oo aad soodajin thumbnail-kaaga YouTube-ka hubso in walxaha oo dhami ay sifiican isuwaafajiyeen.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tababarada » Sida loo sameeyo thumbnails YouTube-ka Canva